करिश्मा मानन्धरका तीन आयाम : कमजोर गणित, बलात्कारीलाई फाँसी र छुटेको अमेरिका - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ असोज ४ गते १२:४५
काठमाडौं । करिश्मा मानन्धरका अहिले परिचय नै तीनवटा छन् – अभिनेत्री, नेत्री र विद्यार्थी ।
अहिले उनको जीवनमा दुईटा आयाम तेज गतिमा र एउटा परिचयको आधार बनेको छ । यदाकदा हुने फिल्मी कार्यक्रममा देखा पर्ने करिश्माको अहिलेको मुख्य काम एसईईको तयारी छ । यो तयारीमा उनले मिहेनत गर्नुपरेको गणित विषय हो । उनले एउटा अन्तरवार्तामा भनेकी छन्– म गणितमा कमजोर छु ।
आउने चैतमा परिक्षा दिनुपर्ने भएकाले उनी फोन त्यति उठाउँदिनन्, बाहिर त्यति हिँड्दीनन् । अध्ययनमा लगनशील भएर लागिरहेकी छन् ।
कमजोर रहेका विषयमा अब्बलतका कसरी हात पार्ने भन्ने सोचमा मग्न छिन् । १४ बर्षको उमेरदेखि अध्ययन छाडेकी उनले जीवनको पूर्वाद्र्ध फिल्ममा बिताइन् । तीन दशक उनले फिल्मी क्षेत्रमा एउटा नाम र परिचय स्थापित गरिन् । अब उनको रहर डाक्टर बन्ने हो । पेट चिर्ने होइन, दिमाग चिर्ने । उनले भनेकी छन्– दार्शनिक ।
त्यसैले उनको दोस्रो आयाम स्थापित गर्छ । डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्ति नेपालमा आवद्ध भएर सक्रियता देखाएकी छन् ।
अध्ययनका कारणले गर्दा यसपटक एक महिनो अमेरिका भ्रमणमा डा. भट्टराईसँग उनी जान नपाएको पनि खुलासा गरेकी छन् । भन्छिन्,‘अध्ययनमा नै व्यस्त भएका कारणले म अमेरिका जान पाइन ।’
मैतिदेवी स्थित त्रिवेणी विद्यायलयकी छात्रा करिश्मा सामाजिक विषयमा पनि चिन्तन राख्छिन् । अहिले उनको पीडाको विषय बनेको छ कञ्चनपुरकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ नपर्नु ।
उनले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय नै मागेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् । यसो लेख्नुको कारण छ उनीसँग । ‘बलात्कार अपराध हो, आपराधिक मानसिकताका मान्छेले त्यसो गरेका हुन् । समाजमा आपराधिक मानसिकतालाई बाँच्न दियो भने के हुन्छ ? त्यसैले लेखेकी हुँ’, उनले भनेकी छन् ।
मिस वर्ल्डको ताज मेक्सिकोकी सुन्दरले लगिन्, नेपालको पोजिसन १२औं
आठ वर्षपछि दोहोरियो बालुवाटार घटना, खनाल मख्ख